Domenico Berardi Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football any Italiana Domenico Berardi Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny sariitatry ny baolina kitra miaraka amin'ny solon'anarana "Mimmo". Ny tantaranay Domenico Berardi Childhood sy ny Untold Biography Facts dia mitondra aminao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny fiainana sy ny fiakaran'ny Domenico Berardi. Credits sary: ​​Sportmirtese, Castrumcropalatum ary SportsMole.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaizany sy ny masony amin'ny tanjona. Na izany aza, vitsy ny mihevitra ny Biography Domenico Berardi izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Domenico Berardi Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fikarohana Untold Biography Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Domenico Berardi dia teraka tamin'ny andro 1 tamin'ny Aogositra 1994 tao Cariati, tanàna iray ao amin'ny faritanin'i Cosenza any amin'ny faritr'i Calabria, atsimon'i Italia. Izy no zandriny indrindra amin'ny zanaka telo naterak'i Maria reniny ary i Luigi rainy.
Domenico Berardi dia teraka tamin'ny ray aman-dreny izay tsy dia fantatra firy. Sary: PxHere sy Sportmirtese.
Ny zom-pirenen'i Italiana manana foko fotsy miaraka amorony kely fantatra dia natsangana tao amin'ny tanànan'i Bosenchigliero any Cosenza any Italia izay nihalehibe niaraka tamin'ny zokiny, Francesco sy anabaviny, Severina.
Domenico Berardi dia lehibe tao Bocchigliero ao amin'ny faritany Cosenza. Sary: WorldAtlas ary Sportmirtese.
Nihalehibe tao an-tanàna, Berardi dia tsy fialan-tsiny kely izay hanomezany azy fahafahana hilalao baolina miaraka amin'ny namany saika isan'andro amin'ny herinandro. Indraindray dia mody marary saina izy, mba hisorohana an-tsekoly sy hankafizany ny filalaovana ilay fanatanjahan-tena.
Domenico Berardi Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fikarohana Untold Biography Fanabeazana sy fanabeazana
Noho ny nateraka ho fianakaviana fianakaviana tia baolina kitra dia Young dia nisoratra anarana tao amin'ny sekoly taranja baolina kitra tao Castello tao Mirto - tanàna iray any Crosia, any amin'ny Faritanin'i Cosenza, Italia - izay nandehanany ny diany voalohany tamin'ny baolina kitra nifaninana.
Domenico Berardi dia nanao ny dingana voalohany amin'ny fifaninanana baolina kitra tao amin'ny sekoly baolina kitra Castello. Sary nahazoan-tsary: ​​Sportmirtese sy TUON.
Nandritra ny fiofanana tany amin'ny Sekoly i Berardi dia nianatra sy nampiseho fahaizan-kery izay mampiseho ny endrika tsara indrindra ho an'ny fanodinana tanjona. Vokatr'izay dia napetraky ny mpanazatra azy matetika ny mpikambana ao amin'ny ekipa hamoaka ny baolina aminy ho amin'ny tanjona azo antoka.
Domenico Berardi Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fikarohana Untold Biography Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Tamin'ny fotoana niarahan'i Berardi dia 13 tao 2008, dia niarahaba ireo namany tany Mirto izy mba hahafahana miditra amin'ny Akademia taranja baolina kitra ao Cosenza izay handaniany ny fotoana fohy indrindra amin'ny fahatanorany (2008 – 2010).
Domenico Berardi karatra fika taranja baolina kitra alohan'ny nidirany an'i Cosenza. Sary nahazoan-tsary: ​​Sportmirtese.
Tamin'ny herinandro lehibe iray, Berardi dia nitsidika ny campus universite an'ny Francesco zokiny tao amin'ny Bodena. Nandritra ny kianjan'ny oniversite dia nandray anjara tamin'ny lalao dimy-laharana niaraka tamin'ny rahalahiny sy mpikambana hafa ao amin'ny oniversite izy. Tsy fantatra an'i Berardi, nisy ny mpitsikileta avy amin'i Sassuolo tamin'ny kilalao izay nanamarika ny talentany talenta.
Domenico Berardi Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fikarohana Untold Biography Road To Fame Tantara
Araka izany, Berardi iray taona 16 iray dia nentina nankany Sassuolo izay niakaran'izy ireo. Nanao ny anjarany i Berardi ho an'ny ekipa voalohany an'ny klioba tamin'ny faha-27 ny volana aogositra 2012 nandritra ny Serie B nanohitra an'i Cesena ary nandeha nanampy ny andaniny ho amin'ny fampiroboroboana ny serie A.
Na dia mety hiakatra haingana aza ny fiakaran'ny Berardi amin'ny alàlan'ny laharana, dia tsy nisy fanapahan-kevitra sarotra eritreretina. Ny mpilalao baolina kitra haingana dia nanana ekipa maro tany Eropa nitady ny soniany. Na izany aza, nihevitra ny tenany ho tsy ampy taona izy ary nisafidy ny hamita ny dingan'ny fahamatorana ao Sassuolo.
Domenico Berardi dia nanapa-kevitra ny hijanona ao Sassuolo na dia misintona klioba lehibe noho ny endriny mahavariana aza. Sary: Castrumcropalatum.
Domenico Berardi Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fikarohana Untold Biography Mitsangàna mba haka tantara
Tao anatin'ny taona maro taty aoriana (2013 - 2015) Domenico dia nanaporofo fa iray amin'ireo mpilalao tanora indrindra nampanantenaina any Italia ary nahazo loka an'arivony isanisany, anisan'izany ny loka 2015 Bravo ho an'ny mpilalao baolina kitra tanora malaza indrindra any Italia.
Inona koa? in-telo isa no voatanisa ho iray amin'ireo mpilalao tanora ambony indrindra 100 eto an-tany nataon'i Don Balón any 2013, 2014 ary 2015. Maimaika haingana amin'ny fotoana hanoratana, Berardi dia mpitsabo ambony indrindra amin'ny fotoana rehetra an'i Sassuolo ary mpilalao tadiavina fatratra izay nahasarika olona avy any Roma, Tottenham ary Liverpool. Ny ambiny, raha ny nambarany dia tantara.
Domenico Berardi dia mpilalao baolina ambony indrindra any Sassuolo tamin'ny fotoana nanoratana. Sary: BleacherReport.
Domenico Berardi Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fikarohana Untold Biography Fiainana mifandraika amin'ny fiainana
Ny fiatrehana ny raharaha momba ny fiainam-pitiavan'i Domenico Berardi, firy ny anarana azon'ny olona iray hita ao amin'ny bokin'ny tantarany sy ny toetrany ankehitriny amin'ny fotoana nanoratana ity bio ity?
Hanomboka, Berardi dia tsy fantatra fa nanambady vehivavy talohan'ny nihaonany ilay sakaizany nivadika ho vady (ho vadiny) - Francesca Fantuzzi. Francesca no nahita voalohany an'i Berardi nandritra ny lalao tamin'ny tanora ary nifandray taminy tamin'ny alàlan'ny Facebook izy. Tsy misaraka izy ireo hatramin'izay ary mety handray ny zanakalahy (zanakavavy) na ny zanany vavy.
Domenico Berardi ao amin'ny sary marika iray miaraka amin'i Francesca Fantuzzi fofombadiny. Sary: Instagram.
Domenico Berardi Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fikarohana Untold Biography Mitantara ny fiainam-pianakaviana
Domenico Berardi dia mihaona avy amin'ny fiavian'ny fianakavianà antonony. Manoritsoritra ny zava-misy momba ny fiainany ara-pianakaviana izahay.
Momba ny rain'i Domenico Berardi: Luigi dia dadan'i Berardi. Mpankafy tia an'i Inter Milan i Luigi talohan'ny nahaterahan'i Berardi. Na izany aza, manana faritra malefaka ho an'i Sassuolo izay tian'ny zanany lahy izy. Ny dadan'izy telo mianadahy dia nanampy ny faniriana an'i Berardi amin'ny baolina kitra ary mbola manohana azy hatrany mandraka ankehitriny.
Momba ny renin'i Domenico Berardi: I Maria no renin'i Berardi. Vehivavy mpikarakara tokantrano izy izay nanampy tamin'ny nitaizana an'i Berardi sy ireo rahalahiny. Ny reny mpanohana telo koa dia manana tombony amin'ny baolina kitra. Raha ny marina dia mpanohana an'i Juventus FC izy ary mazava ho azy, ny zandriny indrindra zanany - Sassuolo.
Domenico Berardi nitaiza ray aman-dreny izay tsy dia fantatra firy. Credits sary: ​​ClipArtStudio ary TransferMarket.
Mikasika ireo rahalahin'i Domenico Berardi: Berardi manana zokiny roa. Anisan'izy ireo i Francesco rahalahiny sy ny rahavaviny Severina. Na dia tsy dia fantatra firy amin'ireo mpirahalahy aza izy ireo dia tsy olona manao fanatanjahantena tena manao asa an-dry zareo tahaka an'i Berardi. Na izany aza, samy tia baolina kitra ary manaraka ny lalao miaraka am-pitiavana.
Momba ny fianakavian'i Domenico Berardi: Lavitry ny fianakavian'i Berardi akaiky, tsy dia fantatra ny momba ny raibeny sy ny ray aman-drenin'izy ireo raha mbola tsy fantatra ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, nenitoany, zanak'olo-mpiray tam-po, zanak'olo-mpiray tam-po aminy ary ny nieces.
Domenico Berardi Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fikarohana Untold Biography Ny fiainan'ny tena manokana
Miresaka momba ny toetran'i Berardi, manana endriny mahatalanjona izy izay taratry ny toetran'ny olona izay tarihin'i Leo Zodiac Sign. Ankoatr'izay, dia mandanjalanja, tsy mandanjalanja ary tena mandia an-tany izy.
Ilay mpilalao milalao izay manambara amin'ny fomba tsotra momba ny fiainany manokana sy ny fiainany manokana, dia manana tombontsoa sy fialamboly izay misy ny hazakazaka F1, mandehandeha, milomano, milalao lalao video, mihaino mozika ary mandany fotoana tsara amin'ny fianakaviana sy ny namany.
Domenico Berardi dia manana tombony amin'ny hazakazaka F1. Azonao jerena Charles Leclerc amin'ny sary? Sary: Instagram.
Domenico Berardi Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fikarohana Untold Biography Fiainana momba ny fiainana
Mikasika ny fomba nametrahan'i Berardi sy handaniany vola, ny tombony amin'ny net dia mbola voadinika amin'ny fotoana nanoratana raha toa ny vidin'ny tsenany amin'ny € 20 tapitrisa. Ny tantaran'ny Berardi kely fanta-daza dia avy amin'ny karamany sy ny fifanarahana nankatoavina.
Na dia tsy vetivety handoka ny harenany ny mpilalaon'ny mpilalao dia mampiseho ny fiadanany sy ny trano lafo vidy, dia lehibe izy amin'ny fanaovana dia lavitra any amin'ny toerana fandraisam-bahiny izay mandany vola sy fotoana tsara amin'ny namany.
Domenico Berardi dia manana fotoana tsara amin'ny trano fandraisam-bahiny lafo vidy miaraka amin'ny namany Marco Benassi. Sary: Instagram.
Domenico Berardi Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fikarohana Untold Biography Untold Facts
Ny tantaran'ny fahazazan'i Domenico Berardi sy ny tantaram-piainana dia mifono tsara amin'ny zava-misy kely kokoa na tsy fantatra kely momba azy.
fivavahana: Domenico Berardi tsy lehibe amin'ny fivavahana raha toa ka tsy misy marika manondro ny zavatra ninoany tamin'ny fotoana nanoratana. Noho izany dia tsy azo raisina amin'ny fomba miavaka izany na mpino izy na tsia.
Tattoos: Berardi dia mihevitra ny zavakanto vatana ho toy ny ilaina ilaina ho an'ny olo-malaza tsara tarehy. Araka izany, manana tombokavatsa lehibe iray eo amin'ny sandriny havia izy. Ny tatoazy dia mampiseho ny marika Berardi nomerao 25 amin'ny kintana iray misy raozy. Eo ambanin'ny tatoazy dia fitaovana toy ny vatofantsika misy tady.
Fivoarana Domenico Berardi Tattoo. Sary: Instagram.
Mifoka sy misotro: Domenico Berardi dia tsy fantatra mifoka amin'ny fotoana nanoratana. Ny antony mahatonga ny fomba fiaina toy izany dia mifototra amin'ny tsy fahitan'ny mpikaroka momba ny baolina kitra ny tombontsoa ateraky ny fiainana fomba fiaina.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny namakiana ny tantaran'ny Domenico Berardi Childhood ary ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Federico Chiesa Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Federico Bernardeschi Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Facts
Gianluigi Donnarumma tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny tantaran'i Moise Kean momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana
Andrea Belotti tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-piainany
Giorgio Chiellini Tantara Momba ny Tantaram-pahamendrehana Ankapobeny
Lorenzo Insigne Fihetseham-po momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny tantaran'ny Ciro Immobile Child Plus Plus no nanambara ny tantaram-piainany
Claudio Marchiso tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bolo mbola tsy fantatra